1A - Iflethi okanye indlu ekwicomplex Igumbi lokulala eliyi-1 Igumbi lokuhlambela eliyi-1, Ichibi Yojoa - I-Airbnb
1A - Iflethi okanye indlu ekwicomplex Igumbi lokulala eliyi-1 Igumbi lokuhlambela eliyi-1, Ichibi Yojoa
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguPablo
Uza kukwazi ukuyixabisa indalo ngokukhululekileyo, ukuzola nokuqaqamba kwelanga lasehlotyeni, kwaye ukuzola okuqaqambileyo kwanengqondo yile nto sikunika yona kule ndawo yaseLake View Village Condominium enefenitshala epheleleyo yokuqesha. Isibonelelo sokuchitha iholide entle nabahlobo okanye intsapho.
Baneflethi okanye indlu ekwicomplex enefenitshala epheleleyo enekhitshi elipheleleyo (iimbiza, iiglasi, iipleyiti, izitya nokunye), iveranda apho unegumbi lokutyela ukuze wonwabele isidlo sakusasa sangaphandle.
Simalunga nemizuzu eyi-10 sihamba ngemoto ukusuka kwidolophu yasePeña Blanca apho unokufumana iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, amayeza kunye nezinye izinto ezininzi. Nakule imeko, endleleni ekusa kwilali ungafumana iivenkile zokutyela nezinye iihotele ezinekhitshi elincinci namaxabiso amahle.
Baza kuba nabasebenzi abafanelekayo abafumanekayo ngalo lonke ixesha kwisakhiwo sethu kwaye banokuhlala benxibelelana nathi ngesicelo okanye kwinombolo yethu ye-Insap.